Dooddii Baarlamaanka Xeerka Mataalada Gobolka Banaadir ee Aqalka Sare oo bilaabatay - Jowhar Somali news Leader
Home News Dooddii Baarlamaanka Xeerka Mataalada Gobolka Banaadir ee Aqalka Sare oo bilaabatay
Dooddii Baarlamaanka Xeerka Mataalada Gobolka Banaadir ee Aqalka Sare oo bilaabatay
Waxaa goor dhow furmay Kulankii Xildhibaannada Golaha Shacabka ee ay kaga doodayaan xeerarka dhammeystirka doorashooyinka Qaran oo ay soo gudbiyeen Guddigii wadajirka ahaa ee Labada Aqal, iyadoo labadii maalmood ee la soo dhaafay la soo gabagabeeyay labadii xeer ee u horeysay ee kala ahaa Hannaanka doorashada Gobolada Waqooyi iyo Qoondada Haweenka.
Kulanka maanta ayaa saacado dib uga dhacay furitaankiisa, kaddib markii ay soo baxday in Guddoonka uu damacsanaa inuu ka saaro ajandaha doodda mataalada Gobolka Banaadir aqalka sare iyo Mooshinkii ay saxiixeen 130 Xildhibaan.
Hase ahaatee markii dambe ayaa Guddoonka oo la kulmay Guddi ka socday Xildhibaannada mooshinka keenay ayaa la isku afgartay in maanta laga doodda matalaada Gobolka Banaadir ee Aqalka Sare la soo gabagabeeyo, isla markaana maalinta Sabtida cod loo qaado.
Qaar ka mid ah Xildhibaannada ayaa qabay in isla maanta cod la geliyo, balse Guddoonka ayaa diidanaa in codeyntaas in xaalad fowdo iyo qas inay horseedo, waxaana la isla meel dhigay in Guddoonka iyo Xildhibaannadab ka soo jeeda Beelaha Hawiye ay caawa shir gaar yeeshaan, Sabtida gelinka horena la ansixiyo.
Sidoo kale ajandaha labaad ee kulanka maanta ayaa ah ka doodista Xeerka asteynta kuraasta Baarlamaanka oo muran badan ka taagan tahay, isla markaana ay jiraan kuraas laga wareejiyay gobolo horay loogu doortay.
Wixii warar ee ku soo kordha kala soco wararkeena dambe